Xeer ilaaliyaha dalka oo maxkamadda sare geeyay kiis ka dhan ah xukunkii BBI | Star FM
Home Wararka Kenya Xeer ilaaliyaha dalka oo maxkamadda sare geeyay kiis ka dhan ah xukunkii...
Xeer ilaaliyaha dalka oo maxkamadda sare geeyay kiis ka dhan ah xukunkii BBI
Xeer -ilaaliyaha Guud ee dalka Paul Kihara Kariuki ayaa Maxkamadda Sare geeyay kiis ka dhan xukunkii BBi, isagoo doonaya inuu buriyo xukunkii Maxkamadda Rafcaanka ee joojiyay dalabkii wax -ka -beddelka dastuurka dalka iyadoo loo marayo geedi socodka (BBI).
Warqad uu maxkamadda u soo gudbiyay Garyaqaa Ken Ogeto, Xeer -ilaaliyaha Guud ayaa doonaya in maxkamadda sare ee dalka ay meesha ka saarto xukunkii 20 -kii Agosto, wuxuuna ku sababayey toban mowduuc oo ah sababaha racfaanka uga qaadanayo.
Xeer-ilaaliyaha Guud ayaa sidoo kale doonaya in 7-da garsoore ee uu hoggaamiyo Madaxa Garsoorka Martha Koome ay dib u eegaan xukunka Maxkamadda Rafcaanka ee ku saabsan su’aalaha xasaanadda madaxweynaha iyo kooramka IEBC ee xaqiijinta saxiixyada taageeraya Xeerka Wax-ka-beddelka Dastuurka 2020 .
Maxkamadda ayaa soo saartay amar joogto ah, oo IEBC ka hor istaagaysa inay qabato afti ku saabsan Xeerka Wax -ka -beddelka Dastuurka 2020 (BBI).
Previous articleDowladda Soomaaliya oo loogu deeqay tallaalka coronavirus
Next articleDHAGEYSO:Ciidamada daacadda u ah Culimada Ahlusunna oo maanta la wareegay degmada Guriceel